၀၈-၀၃-၂၀၁၈ မှ ၁၉-၀၄-၂၀၁၈ ထိ
New U Aesthetic & Laser ၏ ဆိုင်လိပ်စာ
No.210, first floor, Room A-1, Kabaraye Pagoda Road (in front of Kabaraye Pagoda), Mayangone Township, Yangon
Time : 10 am -7pm ( Daily)
&phone;: 09 961 477888
Facebook Page : https://www.facebook.com/newuaesthetic/
New U Aesthetic & Laser ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ New U Aesthetic & Laser မှ ဖြစ်ပါတယ်။
New U Aesthetic & Laser တွင် ပြုလုပ်ခွင့်ရမည့် Facial Brightening Treatment အား ကံထူးရှင် (၂)ယောက်အတွက် မဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း New U Aesthetic & Laser မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
❀ New U ဆေးခန်းတွင် ရရှိနိုင်သည့် ကုသမှုများ ❀
Acne Treatment (၀က်ခြံအမျိုးမျိုး ကုသခြင်း)
Facial Rejuvenation Treatment (မျက်နှာ အသားအရေ နုပျိုကြည်လင်စေရန်ကုသခြင်း)
Chemical Peeling (မျက်နှာပေါ်မှ ဆဲလ်အသေများအား ဆေးသုံးခွာချခြင်း)
Carbon Peeling Laser Therapy (ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းနှင့် အဆီပြန်ခြင်းအား ကုသခြင်း)
Post inflammatory Acne scars Treatment (၀က်ခြံ အမာရွတ်အမဲစက်နှင့် ချိုင့်ခွက်များ ကုသခြင်း)
Freckle and Melasma Treatment (တင်းတိတ် မှဲ့ခြောက်များ ကုသခြင်း)
Filler Injection (နှာခေါင်း၊မေးစိ၊ နှုတ်ခမ်း အားပုံဖော်ခြင်း)
V-shaped Botox Injection and others (အရေးအကြောင်းများ ကုသခြင်း)
Collagen Thread Lift (အသားအရည်တင်းရင်းစေရန် ကြိုးထိုးကုသခြင်း)
Hydrating Booster Injection (ရေဓာတ်ဖြည့် ကုသမှု)
Whitening Injection (အသားဖြူဆေးထိုးခြင်း)
Laser Hair Removal (အမွှေးအမျှင်များ ဖယ်ရှားခြင်း)
Tattoo & Mole Removal (တက်တူး နှင့် မှဲ့ဖျက်ခြင်း)
Mesotherapy (မလိုလားအပ်သော အဆီပိုများအား အဆီကျဆေးထိုးခြင်း)
📞 09777360240, 09961477888
Address - အမှတ် 210, A1, ပထမထပ်, ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်( ကမ္ဘာအေးဘုရားမျက်နှာချင်းဆိုင်), ဇောတိကသင်္ကန်းတိုက်အပေါ်ထပ်, မရမ်းကုန်းမြိုးနယ်
❀ Collagen Threadlift Promo ❀
Collagen ကြိုး Promotion ချတိုင်း ကြိုးကြီးကော မပါဘူးလားဆိုပြီး မေးနေကြသူများအတွက် Collagen Threadlift Promo
Promo price (21.2.18 မှ 4.3.18 အထိ)
Lifting ကြိုးကြီး - 60,000
Lifting ကြိုးလတ် - 30,000
Nose thread - 30,000
Tightening ကြိုးသေး - 8,500 (ကြိုး ၃၀နှင့်အထက်)
လိုအပ်တဲ့ကြိုးပမာဏမှာ တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် မျက်နှာနှင့် နှာခေါင်း အနေအထားအရ ကွာခြားမှုရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဆေးခန်းမှာ Dr နဲ့ လာပြပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်
❀ အအေးလှိုင်းအဆီချကုသမှု ❀
ဝမ်းဗိုက်, ကျော, ပေါင်နှင့် လက်မောင်းမှအဆီပိုများအတွက် လူကြိုက်များပြီး နာကျင်မှုမရှိတဲ့ အအေးလှိုင်းအဆီချကုသမှုလေးက အထူးသင့်တော်ပြီး တကြိ်မ်ဆိုသလောက်ထူးခြားသိသာတာမို့ အမြန်ဆုံး booking တင်ထားကြပါနော်
1 time - 80,000
2 times - 140,000
3times - 180,000
4 times - 200,000
❀ ဝက်ခြံကုသမှု ❀
မျက်နှာပေါ်မှာဝက်ခြံကင်းစင်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေဖို့အတွက် အရမ်းတန်တဲ့ ဝက်ခြံကုသမှုလေးတွေကိုဈေးနှုန်းနဲ့တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
မျက်နှာအဆီဖု နှင့် ရိုးရိုးဝက်ခြံများအတွက်
15000 ကျပ်သာ (လိမ်းဆေးနှင့် သောက်ဆေး)
Peeling - 30000 ကျပ်
၀က်ခြံအမျိုးအစား ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်၍ ဆေးထိုးကုသမှု လေဆာကုထုံးများလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်
ဝက်ခြံဆိုတာစိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး မှန်ကန်သောဆေးဝါးများကို ပုံမှန်သုံးစွဲပေးမယ်ဆို လုံးဝပျောက်ကင်းဖို့ "အာမခံ" ပါတယ်နော်
❀ အဆီချခြင်း ❀
မေး၂ထပ်နဲ့ တခြားနေရာမှ ချရခက်တဲ့ အဆီ cellulite တွေအတွက် အဆီကျဆေး ထိုးရင်း 💉free radio frequency treatment လေးယူကြမယ်
အဆီကျဆေးထိုးခြင်းဟာ အဆီဆဲလ် အရွယ်အစားနဲ့ အရေအတွက်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်
RF ဆိုတာ အဆီဆဲလ်လေးတွေကို အပူပေးပြီး ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အပြင် collagen ထွက်ခြင်းကိုပါအားပေးတဲ့အတွက် အဆီလဲကျ အသားအရည်ကိုလဲ တင်းရင်းစေလို့ အဆီကျပြီး အသားလျော့ရဲမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော်
မးနှစ်ထပ် - 1ကြိမ် 60,000
လက်မောင်း,ပေါင်,ဗိုက် - 1cc - 12,000
(အဆီပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး 5cc မှ 10cc လိုနိုင်ပါတယ်)
ထိုးရမဲ့ အကြိမ် အရေအတွက်က အဆီပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အနဲဆုံး ၄ကြိမ်မှ စပြီးလိုအပ်ပါတယ်ရှင့်
ထုံဆေးလိမ်းပြီးမှ ထိုးတဲ့အတွက် နာကျင်မှု အနဲငယ်ပဲရှိပါတယ်ရှင်
အရေပြား ရောင်တာ ညိုတာ အနဲငယ်ဖြစ်နိုင်ရုံမှ အပ အခြားဆိုးကျိုး ကြီးကြီးမားမား မရှိပါဘူးရှင့်
❀ Chemical Peeling Facial Treatment ❀
ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ အသားအရေ ...နူးညံ့ချောမွေ့တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ Chemical Peeling Treatment လေးအကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပေးပါရစေနော်။
Chemical Peeling လုပ်ရင် အရှိမယ့် အကျိုးလေးတွေကတော့
အ​ပေါ်ယံ အလွှာမှာရှိတဲ့ အမဲစက်၊ ဝက်ခြံ၊ ဝက်ခြံ အမာရွတ်​၊ နေလောင်ကွက်၊ အညစ်အကြေးတွေ ဖယ်ရှားပေးလို့ ဆဲလ်နုနုလေးတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်လာစေပါတယ်။
အဆီပြန်မှုကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အသားအရေ မညီညာမှုကိုလည်း ​လျော့ပါး စေပါတယ်ရှင်။
Chemical Peeling လုပ်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကတော့
Peeling လုပ်ပြီး တစ်ပတ် Toner မသုံးရပါဘူး။
Treatment လုပ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ဆို အသားပတ်သလို အဖတ်လေးတွေ ကွာမှာဖြစ်လို့ မကုတ်ရ၊ မဖဲ့ရ၊ အဝတ်နဲ့ မပွတ်ရပါဘူး။
Moisturizer, Sunscreen သုံးပေးရပါမယ်။
မျက်နှာအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးTreatment ယူဖို့ အကြိမ်အရေအတွက် ကွာခြားပါတယ်။ တစ်ကြိမ် လုပ်ပြီးရင် အမဲစက်လေးတွေ လျော့ပါးလာပြီး ဖြူဝင်းလာပါတယ်။ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်တစ်ခါ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ချောမွေ့တဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို လက်တွေ့ခံစားဖို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်​ တွေနဲ့ အခမဲ့ လာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
အသေးစိတ်သိလိုသမျှကို Facebook message box (သို့) ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိ်ုင်ပါတယ်နော်
Address - အမှတ် 210, A1, ပထမထပ်, ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်( ကမ္ဘာအေးဘုရားမျက်နှာချင်းဆိုင်), ဇောတိကသင်္ကန်းတိုက်အပေါ်ထပ်, မရမ်းကုန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
❀ V-Shape Combo (Botox + Filler) ❀
V shape လေး ဖြစ်ချင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ??
မေးရိုးကြွက်သားကြီးနေရင် Botox ထိုးလို့ရပါတယ် - 150000
မေးစိလေး ချွန်ဖို့တွက်ဆို Filler ထိုးလို့ရပါတယ်- 250000
ပါးဖောင်းနေတာအတွက် အဆီကျဆေးထိုးလို့ရပါတယ်ရှင့်- (၁ကြိမ် ၅၀၀၀၀, ၄ ကြိမ် ၁၆၀၀၀၀)
Combo Package Price (15% off)
Only Botox + Filler = 340000
Botox+ Filler + ပါးအဆီချ = 382500
နိုဝင်ဘာလအတွင်းဝယ်ယူရင်တော့ free IPL or chemical peeling facial treatment တကြိမ် လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ရှင့်
❀ Botox ❀
✳️✳️ မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေအတွက် Botox ထိုးကြရအောင် ✳️✳️
နေရာအလိုက် သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင့်။
နှာဖူးတွန့် 👉 35000
မျက်လုံးဘေးကျီးခြေရာ 👉 30000
နှာခေါင်းရှုံ့Bunny lines 👉 15000
မျက်မှောင်ကြုံ့ 👉 35000
မျက်ခုံးပင့် Brow Lifting 👉 20000
V-shape (သို့) မေးစေ့သွယ် 👉 150000
❀ အသင့်တော်ဆုံးနှုန်းထားနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကုသလို့ရနေပါပြီနော် ❀
ဝက်ခြံချိုင့်ခွက် သက်သာချင်တယ် 😫
ချွေးပေါက်ကျယ်တာ ကုချင်တယ် 😫
မျက်လုံးနားက ဘာမှန်းမသိတဲ့ အဝါဖတ်, အဖြူဖုလေးတွေ ဖျက်ချင်တယ် 😫
အကုန်လုံးကို New U clinic မှာ အသင့်တော်ဆုံးနှုန်းထားနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကုသလို့ရနေပါပြီနော် 😊
ဈေးနှုန်းလား?? တပုံချင်းစီမှာ ရေးပေးထားပါတယ်ရှင့် 😉
အသေးစိတ်သိလိုသမျှကို message box သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိ်ုင်ပါတယ်နော်
Address - အမှတ် 210, A1, ပထမထပ်, ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်( ကမ္ဘာအေးဘုရားမျက်နှာချင်းဆိုင်), ဇောတိကသင်္ကန်းတိုက်အပေါ်ထပ်, မရမ်းကုန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့
❀ Laser Tattoo Removal ❀
လေဆာဖြင့် တက်တူးဖျက်ခြင်းကို တက်တူးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ၁၅၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင်ဖြင့် ကုသမှုခံယူနိုင်ပါပြီရှင့် အသေးစိတ်သိလိုသမျှကို message box သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိ်ုင်ပါတယ်နော်
❀ Thread Lifting (ကြိုးထိုးကုသမှု) ❀
အခုနောက်ပိုင်း အလှအပဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ trend ဖြစ်လာတာကတော့ thread lifting လို့ခေါ်တဲ့ (ကြိုးထိုးကုသမှု) ပါ။ အမေရိကား🇺🇸 နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသာမက ကိုရီးယား🇰🇷နဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထိ ဒီကြိုးထိုးခြင်းကို တမ်းတမ်းစွဲ လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီကြိုးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတတချို့ကို sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Thread lifting ကြိုးထိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲ
ကြိုးထိုးတယ်ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် အရေပြားထဲ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ကြိုး(thread) ကို အရေပြားအောက်ထဲ ထည့်ပြီး လျော့ရဲကျနေတဲ့ အရေပြားကို ပင့်တင်ပြီး တင်းရင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အလှအပပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြိုးလေးတွေမှာ အရေပြားငယ်ရွယ်နုပျိုမှုအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့collagen protein ကိုထည့်သွင်းမြုပ်နှံထားတာကြောင့် သူတို့ဟာ အသားထဲကိုစိမ့်ဝင်သွားပြီဆိုရင် collagen ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားလျော့ရဲနေတာတွေ ပင့်ပေးပြီး အရေပြားကို ပိုတင်းရင်းလာစေခြင်း, အသားအရေကြည်လင်လင်းလက်လာခြင်း, မျက်နှာပေါ်က စိတ်ရှုပ်စရာ အရေးအကြောင်းတွေကိုလျှော့ပါးလာစေခြင်း, ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကောက်ကြောင်းကိုပိုပေါ်လွင်စေခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်တော့ ကြိုးထိုးခြင်းကို အသားအရည်တင်းရင်းစေလိုတဲ့မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းများ နှဖူး, မေးစေ့, ပါး, မျက်ခုံးနှင့်အတူ v shape ဖော်လိုတဲ့ jawline တလျှောက်နှင့်လည်ပင်းတင်းရင်းစေရန်ပြုလုပ်ကြပါတယ်. နှာတံမြင့်မြင့်လေးနဲ့ သဘာဝကျကျ လန်းချင်သူများအတွက်လဲ filler 💉 နှင့်အတူ ကြိုးထိုးခြင်းကိုပါ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိကြိုးထိုးခြင်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကြိုးတွေဟာ အသားထဲကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ PLA (polylactic acid) နဲ့ PDO ( polydioxanone) တွေကို အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်. ကြိုးထိုးခြင်းဟာ အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ ရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး အဓိက ၂မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်နော်။
✍ Not significant Lifting - mono threads အမျိုးအစားနဲ့လုပ်တဲ့ ကြိုးထိုးမှုဟာ collagen effect ဖြစ်တဲ့ အသားအရည်ကိုတင်းရင်းစေခြင်း, အသားအရည် ကြည်လင်ပြီး ငယ်ရွယ်နပျိုစေပေမဲ့ အသားအရည်ကို သိသိသာသာတော့ မပင့်တင်ပေးနိုင်ပါဘူး။
✍Significant lifting - cog threads အမျိုးအစားနဲ့ ကြိုးထိုးတာဟာဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကြိုးထိုးခြင်းရလဒ်နဲ့အတူ အသားအရည်ကိုသိသိသာသာပင့်တင်တဲ့ ရလဒ်ပါရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကြိုးထိုးမယ်ဆို ဘယ်လိုကြိုးမျိုးသုံးမလဲဘယ်လိုရလဒ်မျိုးကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာ ကိုယ်ပြုလုပ်မဲ့ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ကြိုးအမျိုးအစားနှင့်အတူ ဈေးနှုန်းရော ရလဒ်ပါကွာခြားနိုင်လို့ပါနော်။
☑️ထိုးတဲ့နေရာမှာ အညိုအမဲနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
☑️အရေပြားထဲမှ အနည်းငယ်ဆွဲတင်းထားသလိုဖြစ်တတ်ပြီး ဒါဟာဆိုရင်လဲ ရက်အပိုင်းအခြားတခုအတွင်း သက်သာနိုင်ပါတယ်။
📍ထိုးထားတဲ့ကြိုးဟာ ၆လကနေ ၈လအတွင်းမှာ အသားထဲစိမ့်ဝင်ပါတယ်. ရလဒ်ကတော့ ၁၀လမှ တနှစ်ခွဲအထိ ခံကြပါတယ်။
✳️ ဒီကြိုးထိုးခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာကျ ပုံစံ, အသက်အရွယ် နဲ့ အသားအရည်ပေါ်မူတည်ပြီး ထိုးရမဲ့ကြိုးအရေအတွက် နဲ့ အမျိုးအစား ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်တာမို့ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ “NEW U” မှအကြံပြုရင်း အားလုံးပဲ ဆန္ဒနဲ့ အမျှလှနိုင်ကြပါစေရှင်။
✅ New U Aesthetic & Laser Clinic မှာလည်း ဆရာဝန်နဲ့ *အခမဲ့* နွေးထွေးစွာတိုင်ပင်ပြီး Thread Lifting ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြုလုပ်နိုင်ပါပြီလို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော် !
Address: No.210, First floor, Room A-1, Kabar Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp.
Ph. 09777360240, 09961477888
❀ Diode Laser For Hair Removal ❀
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မလိုချင်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရသူတွေရှိမှာပါနော်။ Waxing လုပ်တော့လည်း အခန့်မသင့် လို့ ဆေးလောင်ပြီး အမာရွတ်ကြီးကျန်ခဲ့တာ, ရိတ်ဖို့နှုတ်ဖို့ကြတော့လည်း အမွှေးကြမ်းတွေထွက် နာကျင်မှာ စတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ခေါင်းခြောက်မခံပါနဲ့တော့နော်။
New U Laser Clinic မှာထိရောက်မှုရလဒ်ကောင်းမွန်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိတဲ့ Hair Removal Laser ကုသမှုလေးရှိနေပါပြီ။
Hair removal အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 800 to 808-nm လှိုင်းအလျားအခြေပြု Diode laser system ဟာဆိုရင် Asian အသားအရည်အတွက်အထူးသင့်တော်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းအလွန်နဲပါတယ်နော်။
ဒါ့အပြင် Sapphire Contact Cooling စနစ်ပါဝင်တာကြောင့် ထုံဆေးလိမ်းရတာ gel လိမ်းရတာတွေအတွက် အချိန်ပိုအလုပ်ရှုပ်စရာမလိုဘဲ အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်စွာကုသနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
ကုသရမဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ကတော့ လူတဦးချင်းစီရဲ့ အသားအရောင် နဲ့ hair colour ပေါ်မူတည်ကွဲပြားနိုင်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါနော်။
ထပ်မံသိရှိလိုသမျှကိုလည်း message box မှတဆင့် (သို့ ) ဖုန်းဖြင့် booking တင်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ *အခမဲ့* လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
ဆက်သွယ်ရန် 📞 09777360240, 09961477888
Address - အမှတ် 210, A1, ပထမထပ်, ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်( ကမ္ဘာအေးဘုရားမျက်နှာချင်းဆိုင်), ဇောတိကသင်္ကန်းတိုက်အပေါ်ထပ်, မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
❀ Whitening Injection (အသားဖြူဆေးထိုးခြင်း) ❀
ညိုချောလေးကို မကျေနပ်ဘဲ ဖြူဝင်းလှပ ချင်သူများအတွက်လည်း Whitening Injection (အသားဖြူဆေးထိုးခြင်း) Treatment လေးလည်း New U Aesthetic & Laser မှာ လုပ်လို့ရနေပြီနော်။
၁ကြိမ် ➡️ ၇၅၀၀၀
၃ကြိမ် ➡️ ၂၀၀၀၀၀
၅ကြိမ် ➡️ ၃၀၀၀၀၀
၁ဝကြိမ် ➡️ ၅၀၀၀၀၀
အသေးစိတ်သိလိုသမျှကို message box သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိ်ုင်ပါတယ်နော်။
❀ Carbon Peeling Laser Treatment ❀
နေလောင်ပြီး အသားအရေပျက်စီးလို့ စိတ်ညစ်နေလား??
ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်နုပျိုလှပစေဖို့ ကာဗွန် peeling ကို အသုံးပြုထားတဲ့ လေဆာကုသမှု ရှိပါတယ်။ လေဆာ အပျော့စားပဲဖြစ်လို့ လေဆာပစ်ပြီး ရက်အတန်ကြာရောင်ရမ်းနီရဲမှာကိုလဲ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
Carbon peeling laser နှင့် ကုသမှုခံယူခြင်းဖြင့် အသားဖြူစင်စေပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းနဲ့ အဆီပြန်ခြင်းကို သက်သာစေသည့်အပြင် အရေးအကြောင်းနှင့် အသားအရေမညီညာခြင်းများကိုပါ လျှော့ပါးစေပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ 50000 ပါ။ ဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် buy one, get one အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်။